MSS 6: ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုသေချာစွာဖတ်ရွတ်ခြင်း - Zomi Adventist Innkuan
သငခှနှးစာ (၆) ဘုရားသခငှ၏စကားတောကှိုသခှောစှာဖတရှှတခှှငှး
နိုဝငဘှာ ၂ – ၈
ဥပုသနှေ့မှနှးလှဲပိုငှး နိုဝငဘှာ ၂
ဖတရှနကှမှှးခကှမှှား။ နဟမေိ ၈း၁-၈။ တရားဟော ၃၁း၉-၁၃။ မူဲ ၁ရး၅။ တမနတှောှ ၈း၂၆-၃၈။ နဟမေိ ၈း၉-၁၂။ ဝတှ ၂၃း၃၉-၄၃။
“ထိုသို့ဘုရားသခငှ၏ပညတတွိကမှှးစာကို သခှောစှာဖတရှှတှ ၍ အနကကှိုပှနသှဖှင့ှ လူမှားနားလညစှခှငှေးငှာပှုကှ၏” (နဟမေိ ၈း၈)။
ယရေုရှလငမှှို့ရိုးလညှးတညဆှောကပှှီးပှီ။ မှို့တံခါးမှားကို သခှော စှာတပဆှငထှားပှီ၊ ဣသရလလေူမှိုးတို့သညှ နဟမေိ၏ဦးဆောငမှှုအောကှ ၌ တာဝနမှှားကှပှနစှှောဆောငရှှကကှှသညှ။ မှို့ရိုးကှီးပှီး စီးကှောငှးကို ပတဝှနှးကငှရှှိတဈပါးအမှိုးသားမှားမှငတှှေ့ကှလှှငှ “ထိုအမှုသညှ ဘုရားသခငှ အခှင့နှှင့ပှှီးကှောငှးကို ရိပမှိကှ၏” (နဟမေိ ၆း၁၆)။ ရနသှူတို့သညှ ဣသရလေ၏ဘုရားသညှ စဈမှနကှှောငှးကိုရိပမှိလာသညှ။ အဘယကှှောင့ှ ဆိုသောှ၊ ဆန့ကှငှမှှုအပေါငှးကိုပမာမထား၊ မုနှးတီးမှုမှားကိုဂရုမထား ဣသရလလေူမှိုးမှားသညှ မိမိတို့ခမှှတထှားသောလုပငှနှးကို ပှီးမှောကအှောငှ လုပဆှောငနှိုငကှှသညှ။
မှို့ရိုးကိုတညဆှောကပှှီးသညနှှင့ှ နဟမေိသညှ ယရေုရှလငမှှို့၏ မှို့ဝနရှာထူးကို ရဲတိုကမှှူးဟာနနိကိုခန့ထှားလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ သူ၏ညီ ဟာနနကှိုလညှး ရဲတိုကမှှူးရာထူးကိုခန့အှပလှိုကသှညှ။ ထိုသူနှဈဦးကိုရှေးခယှှ ရာ၌ ရိုးသားဖှောင့မှတပှှီး ယုံကှညစှိတခှရှခှငှးကှောင့ဖှှဈသညှ။ ဘုရား ကိုအလှနရှိုသကေိုးစားသူမှားဖှဈကှသညှ။ (နဟမေိ ရး၂)။ ထို့အပှငှ မှိုးရိုး ကောငှးသူလညှးဖှဈကှသညှ။ မှို့ရိုးသညှ “ဧလုလ” လ တှငပှှီးစီးသညှ။ ဆဌမလမှောကလှဖှဈသညှ။ (နဟမေိ ၆း၁၅)။
ဆကလှကလှုပဆှောငရှနှ မည့သှည့အှရာကနှနှသေေးသနညှး။ ဆကလှကလှေ့လာမည့ှ နဟမေိမှတစှာ (၈-၁၀) သညှ အရေးကှီးသော လုပငှနှးစဉကှို သတတွမလ (Tishri) (နဟမေိ ၈း၂) တှငခှမှှတလှုပဆှောငှ သညှ။ ထိုကမှှးခကှအှရ၊ ဣသရလလေူမှိုးမှားသညှ ဘုရားသခငှ၏နှုတှ ထှကစှကားကို မညမှှှလေးစားနာခံ၍ ထိုနှုတကှပတတှောှ၌ဝမှးမှောကကှှောငှး ကို မှငတှှေ့ရသညှ။
တနင်္ဂနွေ နိုဝင်ဘာ ၃
နေဟမိ ၈း၁၊၂ ကိုဖတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်စကား သည် လူတို့အတွက်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကို မည်သို့ပြောကြားထားသနည်း။
ယုဒလူတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီး ပြီးသည့်နောက် ယေရုရှလင်မြို့တွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ လူအားလုံး တို့သည် ယေရုရှလင်မြို့၊ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကွင်းကြီးထဲ၌ သတ္တမလတွင်စုရုံး လာကြသည်။ သတ္တမလသည် (Tishri) လဟုအမည်ရသည်။ ထိုလသည် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အလွန်အရေးပါသောလဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တံပိုးမှုတ်ပွဲကျင်းပသောလလည်းဖြစ်သည်။ (လ၏အစပထမရက်ကို ဘုရားရှင် တရားစီရင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ လ၏ (၁၀) ရက်မြောက်နေ့ကို အပြစ်ဖြေရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တဲတော်ထိုးပွဲ တော်ကို (၁၅) ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ပြီး၊ အဲဂုတ္တုပြည်ကျွန်ဘ၀မှလွတ်မြောက်လာ ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့် တောထဲလှည့်လည်စဉ် ခံစားရသောဘုရားရှင်၏ ကရုဏာ တော်ကို ရေတွက်ချီးမွမ်းသောပွဲဖြစ်သည်။ လူတို့သည် တဲမိုးမှုတ်ပွဲကျင်းပ သောလ၏ပထမနေ့၌ စုရုံးလာကြသည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့သည် ရှိသမျှ ယောက်ျား၊ မိန်းမများကိုစုရုံးစေပြီး အစီအစဉ်တကျစုရုံးစေသည်။ ပညတ် တော်ကိုဖတ်ရွတ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသင်ယူလေ့လာခြင်းနှင့် ရာဇဝင် သမိုင်းများကို သင်ယူလေ့လာခြင်းများပြုကြရသည်။
လူတို့သည် ဧဇရကိုခေါ်ဖိတ်ပြီး မောရှေရေးသားထားသောပညတ် တော်ကို ဖတ်ပြစေသည်။ စင်မြင့် နှင့် စကားပြောပလ္လင်ကိုလည်း တည်ဆောက် ကြသည်။ ခေါင်းဆောင်များစေခိုင်းလုပ်ဆောင်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ လူတို့ သည် ဧဇရကိုကျမ်းစာအုပ် ယူလာစေပြီး မောရှေရေးသောကျမ်းများကို စတင် ဖတ်စေပါသည်။ သိနာတောင်ပေါ်မှ မောရှေအားပေးခဲ့သောပညတ်တော်လည်း ပါဝင်သည်။
တရားဟောရာ ၃၁း၉-၁၃ ကိုဖတ်ပါ။ ထိုသူတို့ကို ဘုရားရှင် မည်သို့မိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သင်ခန်းစာမည်သို့ရယူနိုင် သနည်း။
တရားဟော ၃၁း၉-၁၃ တွင် မောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးများ ကိုပြောကြားရာတွင် တဲတော်ထိုးပွဲ၌ ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ဖတ်ရွတ်ရန် စုရုံးကြရမည်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေးများနှင့် အခြားပြည်သားများ မိမိတို့အဖွဲ့ဖြင့်သီးခြားနေရာယူပြီး တံခါးအတွင်းတွင် နေရာယူကြရမည်။
နေဟမိ ၈း၁ ၏အဓိပ္ပါယ်အမှန်မှာ “လူတစ်ဦးတည်းကဲ့သို့” ဖြစ်ရန် စုရုံးပေါင်းစည်းလာရမည်။ ယုံကြည်သူအစုအဝေး၌ စည်းလုံးခြင်းသည် မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း ပြောဆိုဆုံးမထားသနည်း။
တနငှလွာ နိုဝငဘှာ ၄
ဧဇရသညှ “ပညတခှကှတှောှ” ကို လူထုကှီးရှေ့တှငဖှတပှှရနှ ယူလာသညှ။ မညသှည့ပှညတခှကှကှိုဖတပှှခဲ့သနညှး။ ပညတတှောှ (၁၀) ပါးကိုသာ ထပခှါတလဲလဲ နေ့တဈဝကခှန့ဖှတပှှခဲ့သညှ။ ပညတပှေးခကှှ မှားကိုနားလညကှှရနှ မောရှေ၏ကမှှးငါးကမှှးကို ဖတကှှားနာယူစခေဲ့သညှ။ ကမဘွာဦးမှတရားဟောရာကမှှးဖှဈသညှ။ ဟဗှေဲ “တိုရပှ” (Torah) ကမှှးဟု လူသိမှားသောကမှှးဖှဈ၏။ ပညတခှကှဟှုခေါတှှငရှာတှငှ ပညတထှားသော အခကှမှှား တဈစိတတှဈပိုငှးသာဖှဈသညှ။ “အကှံပေးခကှမှှား” ဟုအနကှ ပှနဆှိုသောှ၊ ပို၍သင့လှှောမှှနကှနမှညှ။ ကှှနှုပတှို့လှှောကလှှမှးသှားသော ပနှးတိုငှ မယိမှးမယိုငမှလှဲခှောသှှားစရနှေ ဘုရားရှငမှှသှနသှငထှားခကှဖှှဈ သောကှောင့ဖှှဈသညှ။ ဧဇရဖတကှှားစဉှ လူတို့သညှ သူတို့ဆငှးသကလှာ သောရဇဝငကှိုကှားရ၍ ဘုရားသခငှ၏လူမှိုးဟု အတတသှိခှင့ရှခဲ့သညှ။ ဖနဆှငှးခှငှးအခှိနမှှစ ယောရှု၏အခှိနတှဈလှှောကအှကှောငှးမှားကို တဈဆင့ှ ပှီးတဈဆင့ှ သိရှိခဲ့ရသညှ။ ရာဇဝငကှှောငှးမှားအပှငှ သီခငှှးမှား၊ ကဗှာ စာတို၊ ကောငှးခှီးပေးစကားနှင့ပှညတခှကှမှှား၊ ဘုရားရှငှ၏နောကတှောသှို့ တဈစိုကမှတမှတကှှိုးစားလိုကလှှှောကှ၍ ဘုရားရှငမှှ သဈစာကတိတောအှတိုငှး သူတို့အားကာကှယစှောင့ရှှောကတှောမှူကှောငှးကို ပှနလှညသှိရှိရသညှ။
“တိုရပှ” ကမှှးတှငှ ပညတခှကှမှှားပါဝငသှောလှညှး၊ ယငှးထကပှိုသော အကှောငှးမှားစှာရှိသညှ။ ဘုရားသခငှ၏လူမှိုးမှားစညှးလုံးခှငှးနှင့ှ ဘုရားရှငှ ပို့ဆောငတှောမှူခှငှးအကှောငှး အထူးသဖှင့ရှေးသားထားသညှ။ အကှိုးဆကှ အဖှဈ အဖှဲ့အစညှးတဈခု၏အခှအမှဈခေိုငလှုံကှောငှးကို ပေးစှမှးသောကမှှး ဖှဈသညှ။
နဟမေိ ၈း၃ ကိုဖတပှါ။ တရားဟော ၄း၁။ ၆း၃၊၄။ ယောရှု ၁း၉။ ဆာလံ ၁း၂။ သုတတွံ ၁၉း၂၀။ ယဇကှလေေ ၃ရး၄ နှင့ှ မူဲ ၁ရး၅ ကိုလညှးဖတပှါ။ ယငှးကမှှးခကှမှှားမှ ကှှနှုပတှို့ကိုဘုရားရှငှ၏နှုတကှပတှ တောအှား ဖတကှှားနာယူရနမှညသှို့သှနသှငသှနညှး။
ဧဇရသညှ ယရေုရှလငသှို့ပှနရှောကရှှိလာခှိနမှှစ၍ (၁၃) နှဈတာ အတှငှး၊ နှုတတှောထှှကစှကားမှားကို ဖတရှှတသှငကှှားပေးခှငှးဖှင့ှ လူတို့ သညှ ပို၍ပို၍ကှားနာခငှသှောဆနဒွမှား တဖှားဖှားပေါပှေါကစှသညှေ။ သူသညှ ဘုရားရှငှ၏အမှုတောှ၌ဆကကှပကှာ ထူးခှားပှောငှးမှောကစှှာလုပဆှောငှ မည့ှ သနနွိဌာနစှိတပှှငှးပှသညှ။ ဧဇရထံမှကှားရသမှှသော နှုတတှောထှှကှ စကားမှားသညှ သူတို့အတှကလှိုကလှှှောကကှငှ့ကှှံရနှ အမှနတှရားတဈခု ဖှဈလာသညှ။ ရလဒအှဖှဈ သူတို့သညှ သာ၍သာ၍ကှားနာလိုသောစိတှ ဆုံးဖှတခှကှမှှားရှိလာသညှ။ အကှောငှးမှာ နှုတကှပတတှောကှိုအလှနစှိတှ ဝငစှားအားကှီးလာကှသညှ။ ထိုသို့အခှအနမှေေိုးရောကလှာသောအခါ၊ “တိုရပှ” ကမှှးကိုမှတနှိုးရိုသလကှှေ လေ့လာသငယှူလိုစိတမှှား ပိုမိုခိုငမှှဲ လာကှသညှ။
နှုတကှပတတှောနှှင့နှီးကပစှှာအသကရှှငနှထေိုငခှှငှးသညှ ဘုရားသခငှ နှင့အှတူနထေိုငရှနှ သာ၍နကနှဲသောအသကတှာကို ဖနတှီးပေးနိုငသှညှ။ ဘုရားရှငှ၏နှုတကှပတတှောနှှင့ှ ကှှနှုပတှို့နှင့ဘှယကှဲ့သို့ပတသှကှ သနညှး။ ထိုနှုတကှပတတှောကှိုယုံကှညကှိုးစားပါသညဟှု သငဆှိုသည့တှိုငှ၊ ထိုသို့ပှောကှားခှငှးအပေါှ သငှ၏အသကတှာကိုမညသှို့ပေါလှှငမှှုဖှဈစေ သနညှး။ သှနသှငခှကှအှားလုံးကို သငလှိုကနှာလုပဆှောငပှါမညဟှု စိတထှဲ အကှံရှိနသညအှတေိုငှး အောငမှှငမှှုရှိပါသလား။ သမမွာကမှှးစာ၏သှနသှငှ မှုကို နာခံခှငှးမရှိသောအသကတှာဖှဈခဲ့သောှ မညသှို့သောအသကတှာမှိုးနှင့ှ အသကရှှငမှညနှညှး။
အငှဂွါ နိုဝငဘှာ ၅
နဟမေိ ၈း၄-၈ ကိုဖတပှါ။ ပညတခှကှဖှတကှှားခှငှးကို မညသှို့ အဆုံးသတခှဲ့ကှသနညှး။
တဈဖှဲ့ကိုလူ (၁၃) ဦးဖှင့ဖှှဲ့စညှးထားသောအဖှဲ့နှဈဖှဲ့သညှ နဟမေိ နှင့အှတူဖတရှှတခှှငှးကိုပှုရနှ အတူထလကှနှကှသညှေ။ ပထမအဖှဲ့ပုဂဂွိုလှ (၁၃) ဦး (နဟမေိ ၈း၄)၊ ဘုရားရှငှ၏ နှုတကှပတတှောကှို ကူညီဖတကှှား ရနဖှှဈသညှ။ ဒုတိယအဖှဲ့ပုဂဂွိုလှ (၁၃) ဦးမှာ၊ (နဟမေိ ၈း၇) ဖတကှှား သမှှကို နားလညသှဘောပေါကကှှရနှ ပှနလှညရှှငှးပှသညှ။ ပှည့သှူ့ ရငပှှငှ၌ ပှုလုပသှော ဖတကှှားခှငှးအစီအစဉကှို မညသှို့မညပှုံအစီအစဉတှကှ ပှုလုပကှှောငှးကိုမူ ကှှနှုပတှို့ မသိရပါ။ ဖှဈနိုငခှှရှေိသည့အှနအထေားမှာ ကူညီရှတဖှတပှေးသောပုဂဂွိုလမှှား၏လကထှဲ၌ “တိုရပှ” ကမှှးကိုကိုငထှား ကှဟနရှှိသညှ။ (ဟဗှေဲလူမှားပှုစုသောကမှှးစာလိပကှှီးမှားသညှ အလှနှ လေးလံပှီး ကူညီဖှန့ပှေးရသူရှိရသညှ။) သို့မှသာ ဖတကှှားပေးသူအတှကှ အဆငပှှစှောဖတရှှတနှိုငမှညဖှှဈသညှ။ အဘယကှှောင့ဆှိုသောှ နံနကယှံ မှမှနှးတည့ခှှိနအှထိ ဖတရှှတလှေ့ရှိကှသညှ။ ရငပှှငပှေါရှှိလူအားလုံးမှငတှှေ့ ကှားနာရအောငှ ပှသဖတရှှတပှေးရသညှ။
နဟမေိ ၈း၈ ၌ပါရှိသောစကားစုမှာ “သခှောစှာဖတရှှတှ၍” “လူမှား နားလညစှခှငှေးငှာပှုကှ၏” ဆိုသည့ှ ကမှှးပိုဒတှိုငှးကို အနကပှှနဆှိုအဓိပပွါယထှုတှ ပေးသညဟှု ယူဆရသညှ။ တဈခှိနတှညှးပှုရသောအလုပဖှှဈသညှ။ လူတို့ သညှ ဗာဗုလုနပှှညမှှပှနလှာကှသောကှောင့ှ နှဈပရိဈဆဒမှေားစှာကှာမှင့ပှှီး “အရမဈ” စကားကိုသာ ပှောဆိုအသုံးပှုခဲ့ကှရာ၊ ဟဗှေဲဘာသာစကားဖှင့ှ ဖတကှှားခှငှးကိုကှားရလှှငှ လူအမှားစုမှာ ကောငှးစှာနားမလညနှိုငဖှှဈ နသညှေ။ အထူးသဖှင့ှ လူငယမှှိုးဆကသှဈမှားသညှ နားမလညကှှပါ။ သို့ဖှဈသောကှောင့ှ ဖတကှှားပေးသူမှားအနဖှငှေ့ အနကအှဓိပပွါယသှကရှောကှ မှုရှငှးလငှးခကှကှို တဈခှိနတှညှးမှာပငပှှုလုပပှေးရသညှ။ ဟောကှားခှငှး နှင့အှတူ အဓိပပွါယရှှငှးလငှးခကှကှိုဖှင့ဆှိုသောအခါ ကှားနာရသူမှားကို နိုးကှားစကော စိတဝှငစှားမှုပိုမိုခံစားရရှိ၍ ကိုယစှီကိုယငှ မိမိတို့အတှကှ သတငှးစကားမှားရရှိသှားကှသညှ။
တမနတှောှ ၈း၂၆-၂၈ ကိုဖတပှါ။ ပေးထားသောကမှှးခကှအှရ၊ ယရေုရှလငမှှို့၌ မညသှို့သောပှိုငတှူကိဈစတဈခုဖှဈပေါလှာသနညှး။ ကှှနှုပှ တို့အတှကှ မညသှည့သှငခှနှးစာမှားရရှိသနညှး။
ကှှနှုပတှို့ပရိုတကစှတင့ှ အားလုံးတို့သညှ သမမွာကမှှးစာကို ကိုယတှိုငှ ဖတှ၊ ကိုယတှိုငလှေ့လာပှီး နားလညသှိရှိရမညဟှု သဘောပိုကယှုံကှညှ ခကှထှားကှသညှ။ မကှစှိစုံမှိတပှှီး တဈဦးတဈယောကှ၏ လိမလှညနှခှငှေး ကို ကမှှးစကားအမှနဟှုမယုံကှညရှပါ။ အမိန့ပှေးအတငှးယုံကှညစှခှငှေး မှိုးကိုလညှး ကှှနှုပတှို့လကမှခံရပါ။ တဈခှိနတှညှးမှာပငှ ရှငှးပှပေးသူမရှိ သောကမှှးခကှကှိုဖတရှသူအတှကှ ကောငှးခှီးမငှဂွလာဖှဈစနေိုငမှညလှား။ ကှှနှုပတှို့အယောကစှီတိုငှး မိမိ၏ ယုံကှညခှကှကှို အခှခေံကကှနှားလညှ ထားရနလှိုအပသှညှ။ တဈပါးသူမှားအလငှးပှပေးခှငှး၌ အကှိုးမရှိပါဟု ဆိုလိုသောအဓိပပွါယမှဟုတပှါ။
ဗုဒ္ဓဟူး နိုဝင်ဘာ ၆
ဧဇရမှ ထာ၀ရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် (တိုရပ် ကျမ်း) လူအပေါင်းတို့သည် မတ်တတ်ရပ်လာကြသည်။ တိုရပ်ကျမ်းကို ဧဇရသည်မဖတ်ကြားမီ ထာ၀ရဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကို ဦးစွာချီးမွမ်း၏။ “တိုရပ်” ကျမ်းကိုဖတ်ရွတ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ လူအပေါင်းတို့သည်လည်း “အာမင်” ဟုတညီတညွတ်တည်း အာမင်၊ အာမင်ဟု (နေဟမိ ၈း၅၊၆) လက်ကိုမြှောက် ၍ရွတ်ဆိုကြသည်။ လူအားလုံးတို့သည် ဦးညွတ်လျက်၊ မျက်နှာကိုမြေကြီး နှင့်ထိတွေ့သည်အထိ ထာ၀ရဘုရားကိုလေးမြတ်ဦးတိုက်ကြ၏။
နေဟမိ ၈း၉-၁၂ ကိုဖတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်များတို့သည် လူများ အား “ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမပြု” ရန်အဘယ်ကြောင့်ပြောကြားသနည်း။
ထိုသို့ဖြစ်၍ နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ဖတ်ရွတ်သောအချိန်တိုင်းတွင် ဗာဗုလုန်မှယေရုရှလင်သို့ပြန်ခဲ့ရသော ပြည်တော် ပြန်လူမျိုးတို့သည် မိမိတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များအတွက် ငိုကြွေးမြည်တမ်း ကြ၏။ ကြင်နာသောစကားသံဖြင့် “ငိုကြွေးခြင်းမပြုကြနှင့်။. . . သွားကြ လော့၊ မြိန်စွာသောအစာကိုစားကြလော့။ ချိုသောအရည်ကိုသောက်ကြလော့။ ဆင်းရဲသောသူတို့အားမျှဝေကြလော့။ ဤနေ့ရက်သည် ငါတို့ဘုရားရှင်အဖို့ သန့်ရှင်း၏။ ဝမ်းမနည်းကြနှင့်။ ထာ၀ရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့် အားယူ ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟု လူအပေါင်းတို့အားဆိုကြ၏” (နေဟမိ ၈း၉၊၁၀)။ Ellen G White, The Ministry of Healing, p. 281.
လူများတို့သည် ဘုရားရှင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးနောက် မိမိတို့၌ရှိသောအပြစ်အတွက်ဝမ်းနည်းကာ စတင်ငိုကြွေးတော့သည်။ ထာ၀ရ ဘုရားသည် ထင်ရှားလာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ပြည့်၀သော မေတ္တာတော်၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ကရုဏာတော်၊ သစ္စာတည်ခြင်းများကို မြင်တွေ့ရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းခြင်း၊ မထိုက်တန်ခြင်းများကိုနားလည်ပြီး ရှေ့တော်မှောက်သို့လာရန်လိုကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ဘုရားရှင်သန့်ရှင်းတော် မူခြင်းကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိရ၍ ကျွန်ုပ်တို့အလင်းသစ်ကိုရရှိလာသည်။
ထိုမှန်ကန်သောနောင်တကြောင့် ဣသရေလလူတို့သည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ ၏။ သို့သော် ဝမ်းနည်းရန်မလို၊ ]]ထာ၀ရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့် အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြလော့}} (နေဟမိ ၈း၁၀)။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် အားနည်းခြင်းကိုမေ့ပျောက်ပစ်ပြီး ထာ၀ရဘုရား၏တန်ခိုးတော်၌ ကိုးစား ယုံကြည်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ထိုနေ့သည်လည်း အထူးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောနေ့၊ တံပိုးမှုတ်ပွဲနေ့ (ရို့ရှ်ဟပ်ရှဲနာ့) (Rosh Hashanah) တံပိုးများမှ မှုတ်သံကို ကြားရသည်နှင့် မိမိတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရမည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့ ကို (Tငျ့မင) လ၏ဆယ်ရက်မြောက်နေ့၌ကျင်းပသည်။ တံပိုးမှုတ်သံသည် လူအများဘုရားရှင်၏ရှေ့တော်၌ထပြီး နောင်တစိတ်ရရှိရန် သင်္ကေတဖြစ် သည်။ ထိုနေ့သည် လူများဘုရားရှင်ထံပြန်လာရန် တမင်စီစဉ်ထားသည်။ ငိုကြွေးခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းများကို နားလည်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် ဦးစီး ဦးဆောင်သူများက သူတို့အားသတိပေးချက်မှာ၊ နောင်တရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ကြားသိပြီဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ကြောင့် ငိုကြွေးဝမ်းနည်းနေမည့်အစား၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီဖြစ်သောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြရန်ဖြစ်သည်။
အပြစ်မည်မျှဆိုးရွားသည်ကို ယေရှုရှင်သည် ကပ်တိုင်ပေါ်၌အသေခံ ကာ ပြဿနာအလုံးစုံကိုဖြေရှင်းပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၌မျှော်လင့်ချက်ကို ပေးနေပါသလား။
ကြာသပတေး နိုဝင်ဘာ ၇
“ထာ၀ရဘုရားပေးတော်မူသောအခွင့်နှင့် အားယူ၍ဝမ်းမြောက်ကြ လော့” (နေဟမိ ၈း၁၀) ဟူသော ကျမ်းချက်သည် ဘုရားသခင်မှကျွန်ုပ်တို့ကို ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ရွှင်လန်းခြင်းရှိရန် အလိုတော်ရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အခြား သောရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးနှင့်မတူဘဲ၊ ဘုရားရှင်၏ မေတ္တာတော်ကိုသိရ သော ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ထာ၀ရဘုရား၌ရွှင်လန်းခြင်းရှိသည်ဆို သည်မှာ ကိုယ်တော်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိရ၍ ဝမ်းမြောက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာကို ဘုရားသခင်သည် အလုံးစုံသောပြင်ဆင်ပေးမှုကို စီမံထားပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့် နေ့စဉ် အသက်တာအခက်အခဲကို ကိုယ်တော်ဖြေရှင်းပေးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုထက်ပို၍ ထာ၀ရဘုရား၌ရွှင်လန်းခြင်းသည် ခွန်အားကိုဖြစ်စေ၍၊ နေ့စဉ် တွေ့ကြုံရမည့်လမ်းခရီးအခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှားသွားနိုင်သည်။
နေဟမိ ၈း၁၃-၁၈ ကိုဖတ်ပါ။ မည်သို့အကြောင်းရှိသနည်း။ ယင်းနောက် လူတွေ၏အကြောင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်များအကြောင်းကို မည်သို့ ပြောထားသနည်း။
နောက်တစ်နေ့တွင် ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲများသည် ဧဇရထံသို့ ရောက်လာကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်ယူ လေ့လာရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသောမြင်ကွင်းအရ၊ ခေါင်းဆောင်များ တို့သည် ဘုရားရှင်၏အထံတော်သို့ မိမိတို့၏လူမျိုးကိုပို့ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိ ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ လူများကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ထံမှဥာဏ်ပညာနှင့် ဘုရားရှင်ကိုမှီခိုခြင်းမရှိပါက လုံး၀မဖြစ် နိုင်ကြောင်းကို ကောင်းစွာ နားလည်ထားကြသည်။
ဝတ် ၂၃း၃၉-၄၃ ကိုဖတ်ပါ။ ဣသရေလလူများ မည်သည့်အမှု ကိုပြုရမည်ဟု အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်သနည်း။ အဘယ်အတွက်ကြောင့်နည်း။
နေဟမိ ၈း၁၅ ကိုဖတ်ရှုမှတ်သားပြီး၊ ကျမ်းချက်၏ဆိုလိုချက်မှာ လုပ်ဆောင်မည့်အရာမှန်သမျှ နှုတ်ကပတ်တော်မှရေးသားချက်အတိုင်းဖြစ်ရ မည်ဟုပါရှိသည်။ အခြားသောပုံနမူနာတစ်ခုမှာ သူတို့သည် ထာ၀ရဘုရား ၏စကားတော်ကိုနာခံရန် အထူးအလေးထား၍အလိုရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၊ သိမ်းယူခြင်းခံရပြီးနောက် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း နားထောင်မှုမရှိ ခြင်း၏အကျိုးရလဒ်ကို သင်ယူမိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်း တွင်ဖော်ပြသောကျမ်းချက်များ၌လည်း သူတို့သည် ပွဲများကျင်းပကာ၊ “ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားရှေ့တော်၌ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုကြ ၏” (ဝတ် ၂၃း၄၀)။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ကယ်တင်ခြင်း၏ ကျေးဇူးကရုဏာ တော်အကြောင်းကိုသတိရလျက် ဘုရားရှင်၏ပြုတော်မူသောကျေးဇူးကို ချီးမွမ်း လျက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြသည်။
ယေရှုရှင်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်အရာပေးထားကြောင်းကို တွေးဆကြည့်ပါ။ ယေရှုသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကျင်းပသောပွဲတော် များအားလုံး၏ပုံဆောင်မှု၏ အရှင်ပင်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်း နှောင့်ယှက်ခြင်းများ ပြင်းထန်ခက်ခဲစွာရင်ဆိုင်ရချိန်၌ သခင်ဘုရားကို မျှော်ကြည့်ပြီး ဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းခြင်းစိတ်ရှိနိုင်ရန် မည်သို့သင်ယူနိုင်မည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ယခု လိုမျိုးနောက်ဆုံးကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးသတိပြုလုပ်ဆောင်ရန် သင်ခန်းစာဖြစ်နေပါသနည်း။
သောကြာ နိုဝင်ဘာ ၈
အယ်လင်ဂျီဝှိုက်၏ပုရောဖက်နှင့်ဘုရင်များစာအုပ်မှ စာမျက်နှာ ၆၆၁- ၆၆၈ တွင် “Instructed in the Law of God” ခေါင်းစဉ်ပါအကြောင်းကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
“ယခုတွင်သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏ကတိတော်၌ မိမိတို့၏ယုံကြည် ခြင်းကိုပြသရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် သူတို့၏ နောင်တမျက်ရည်ကို လက်ခံတော်မူပြီ။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာသိရှိရပြီးနောက် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းအပြည့်အဝဖြင့် ဘုရားသခင် မှသူတို့အား ပြန်လည်ခိုင်မြဲစေကြောင်းကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။
ဘုရားရှင်ထံတော်သို့ စစ်မှန်သောနောင်တဖြင့်ပြန်လာသူတိုင်းကို အသက်တာတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းအခွင့်ကိုရစေပါသည်။ အပြစ် သားများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကိုခံယူလျှင် မိမိတို့၏ အားနည်းခြင်းမပြည့်စုံမှုများကိုသိမြင်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောသဘောနှလုံးသွင်းကာ ကြီးမြတ်သောအောင်မြင်မှုရရှိသွားသည်။ မိမိကိုယ်ကိုပညတ်ချိုးဖောက်သူအဖြစ် မြင်တွေ့ပြီးသည်နောက် ဘုရားရှင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူကာ လုံခြုံသော အသက်တာသို့ဝင်ရောက်ခိုလှုံရသည်။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရား၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတော် အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ကာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ခြင်းရရှိသည်။ နောင်တရ ၍ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်အရိပ်ပြန်၍ခိုလှုံလာသူတိုင်းကို ဘုရားရှင်သည် မိမိ၏ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ပတ်ရစ်ဝန်းရံစေသည်။ အနာရှိသမျှကိုကုစား စည်းပေးကာ အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောပစ်လိုက်သည်။ ထိုနောက်တွင် ကယ်တင်ခြင်း၏ဝတ်ရုံတော်ဖြင့် လွှမ်းခြုံဝတ်ဆင်စေသည်။” Ellen G White, Prophets and Kings, p. 668.
Prev post 6.	Bus Tung aa Thugenpa
Next post Sih ding A Patau Vet Lote